Wararka Suuqa Kala Iibsiga Ee Ciyaaraha: Diego Costa, Nikola Milenkovic, Jordan Amavi, Franck Kessie
[ May 10, 2021 ] Chelsea oo dib usoo ceshaneysa xidiga wadanka Masar mohamed Salah.	Wararka Ciyaaraha Maanta
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha: Diego Costa, Nikola Milenkovic, Jordan Amavi, Franck Kessie
March 9, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Wargeysyada 0
ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee maanta oo aad maalin walbo kala socotaa Warbaahinta Ciyaaro.com
Qeybta Danbe Suuqa kala iibsiga Maanta ( 9 Feb )
Weeraryahankii hore ee kooxaha Atletico Madrid iyo Chelsea Diego Costa oo 32 jir ah ayaa loo soo bandhigay qandaraas uu sanadkii ku qaadanayo 3m-euro oo uu kaga qaadanayo kooxda Benfica . (Goal)
Manchester United, Tottenham iyo Liverpool ayaa xiiseynaya 23 jirka daafaca Fiorentina Nikola Milenkovic. (Calciomercato)
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqi doonto inay si xor ah kula soo saxiixato daaficii hore ee Aston Villa Jordan Amavi xagaagan marka 26 jirkaan qandaraaskiisa uu dhacayo. (Dailystar)
Manchester United ayaa ka dhigatay Leeds weeraryahankeeda reer Brazil Raphinha, 24-jir, bartilmaameedkeeda ugu sareeya xagaaga. (Express)
Real Madrid ayaa rajeyneysa in qaab ciyaareedka Gareth Bale ee qaab ciyaareedka Tottenham ay sahli doonto inay 31 jirkaan reer Wales uu toos uga tago kooxda. (Dailymail)
Manchester City ayaan wax heshiis ah la galeynin weeraryahanka Paris St-Germain Kylian Mbappe, 22, xagaagan sababo la xiriira mushaharka ciyaaryahanka reer France, lakin Erling Braut Haaland, iyo Romelu Lukaku ayaa loo arkaa badalkooda. (the athletic)
Qeybta Hore Suuqa kala iibsiga ( 9 Feb )
Chelsea ayaa qorsheyneysa inay qandaraas cusub u soo bandhigto daafaca Andreas Christensen, sida laga soo xigtay The Telegraph .
Bayer Leverkusen ayaa laga yaabaa inay raadiso inay horumariso daafaceeda iyadoo lasoo saxiixato daafaca dhexe ee Union Berlin Marvin Friedrich, sida ay qortay Kicker .
Ilaix Moriba, oo todobaadkan dhamaadkiisii dhaliyey goolkiisii ​​ugu horeeyey ee lama ilaawaan ah , ayaa durba helay dalabyo muhiim ah, sida uu qoray wargayska Marca .
Real Madrid ayaa u aqoonsatay ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Manchester City Riyad Mahrez inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga – sida ay qortay Foot Mercato .
Arsenal ayaa isku diyaarineysa inay xagaaga la soo wareegto daafaca Marseille Jordan Amavi – sida ay qortay Daily Star .
Barcelona ayaa filaneysa in Philippe Coutinho uu ka tagayo Camp Nou suuqa kala iibsiga ee soo aadan, AS
AC Milan ayaa dooneysa inay heshiis cusub ka saxiixdo Franck Kessie, sida ay qortay Gazzetta dello Sport.
Football Insider ayaa warinaya in Leeds United aysan u dhaqaaqi doonin Adama Traore inkasta oo Wolves ay hoos u dhigtay qiimihiisa. Football Insider
Chelsea oo dib usoo ceshaneysa xidiga wadanka Masar mohamed Salah.